ဆောင်းပါး > ဘုရားသခင် > ဘုရားသခငျသညျကားအဘယ်သူနည်း
သမ္မာကျမ်းစာက “ဘုရားသခင်” ဟုဖော်ပြထားသောနေရာတွင် ဘုရားသခင်ဟုခေါ်သော “မုတ်ဆိတ်မွှေးနှင့် ဦးထုပ်ပါသော အဘိုးအို” ဟူသော အဓိပ္ပာယ်တွင် တစ်ခုတည်းသောသတ္တဝါဟု မဆိုလိုပါ။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ကွဲပြားသော သို့မဟုတ် "ကွဲပြားခြားနားသော" ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးဖြစ်သော ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တို့ကို စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဖန်ဆင်းပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်ကို အသိအမှတ်ပြုသည်။ အဖေက သားမဟုတ်ဘူး၊ သားက အဖေမဟုတ်ဘူး။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ခမည်းတော် သို့မဟုတ် သားတော်မဟုတ်ပါ။ သူတို့မှာ မတူညီတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ရှိပေမယ့် တူညီတဲ့ စိတ်ရင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ တူညီတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ တူညီတဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ တူညီတဲ့ ဖြစ်တည်မှု (1. မောရှေ ၁:၂၆; မဿဲ ၂၈:၁၉၊ လု 3,21-22) ။
ဘုရားသုံးဆူသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အလွန်ရင်းနှီးပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အလွန်ရင်းနှီးသောကြောင့် ဘုရားတစ်ဆူကို သိလျှင် အခြားလူကိုလည်း သိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် တစ်ဆူတည်းရှိကြောင်းကို ယေရှုဖော်ပြခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါတွင် ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲတွင် ရှိနေသင့်သည် (မာကု ၁။2,29) ဘုရားသခင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးသည် တစ်ဦးထက်နည်းသော အရာဟု ထင်မြင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမှုကို သစ္စာဖောက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးဖြင့် တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည် (1. ဂျိုဟန် 4,16) ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သော ဤအမှန်တရားကြောင့် ဘုရားသခင်ကို တစ်ခါတစ်ရံ “သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ” သို့မဟုတ် “သုံးပါးတစ်ဆူဘုရား” ဟုခေါ်သည်။ သုံးပါးတစ်ဆူ နှင့် သုံးပါးပေါင်း နှစ်ခုလုံးသည် "တစ်ဆူတည်း" ကို ဆိုလိုသည်။ “ဘုရားသခင်” ဟူသော စကားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ အသံထွက်သောအခါတွင်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ကွဲပြားသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးကို စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပြောဆိုလေ့ရှိသည် (မဿဲ၊ 3,16-17; ၂၈.၃8,19) “မိသားစု” နှင့် “အဖွဲ့” ဟူသော ဝေါဟာရများကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပုံနှင့် ဆင်တူသည်။ မတူကွဲပြားသော်လည်း တန်းတူညီတူရှိသော "အသင်း" သို့မဟုတ် "မိသားစု"။ ဘုရားသခင်သည် တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသုံးပါးရှိသည်ဟု မဆိုလိုပါ၊ သို့သော် ဘုရားတစ်ဆူတည်းတွင် မတူညီသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးရှိသည် (1. ကောရိန္သု ၁2,4နှစ်ဆယ် 2. ကောရိန္သု ၁၃:၁၄)။
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပြီးပြည့်စုံသောဆက်ဆံရေးကို နှစ်သက်သဖြင့် ဤဆက်ဆံရေးကို သူတို့ကိုယ်သူတို့ မထိန်းသိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ သူမ အရမ်းကောင်းလွန်းတယ်။ Triune God သည် အခမဲ့လက်ဆောင်အဖြစ် အခြားသူများ ဤဘဝကို ထာဝစဉ်ပျော်မွေ့စေရန်အတွက် အခြားသူများကို သူ၏အချစ်တော်ဆက်ဆံရေးတွင် လက်ခံလိုသည်။ Triune God ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ သူ၏ရွှင်လန်းသောအသက်တာကို အခြားသူများနှင့်ဝေမျှရန် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးနှင့် အထူးသဖြင့် လူသားတို့ကို ဖန်ဆင်းခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည် (ဆာလံ ၈၊ ဟေဗြဲ၊ 2,5-၈)။ ဤသည်မှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် "မွေးစားခြင်း" သို့မဟုတ် "မွေးစားခြင်း" ဟူသော စကားလုံးများဖြင့် ဆိုလိုသည် (ဂလာတိ) 4,4စာ-၇; ဧဖက် 1,3စာ-၉; ရောမ 8,15စာ-၁၇.၂၃)။ Triune God သည် ဘုရားသခင်၏ အသက်တာ၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးကို ထည့်သွင်းရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ မွေးစားခြင်းသည် ဖန်ဆင်းခံအရာအားလုံးအတွက် ဘုရားသခင် ပထမဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ “A” သည် “မွေးစားခြင်း” ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ရှိသော အစီအစဉ် “A” အဖြစ် ဘုရားသခင်၏ သတင်းကောင်းကို တွေးကြည့်ပါ။
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ ဖန်ဆင်းခြင်းမခံရမီ တည်ရှိသောကြောင့်၊ ၎င်းကို လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ရန် ဖန်ဆင်းခြင်းသို့ ဦးစွာရောက်ရှိစေရမည်။ သို့သော် မေးခွန်းပေါ်လာသည်- သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရား၏ ဆက်ဆံရေးထဲသို့ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် လူသားတို့ မည်သို့ပါဝင်လာသနည်း၊ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ဤဆက်ဆံရေးသို့ ဖန်ဆင်းခြင်းသို့ ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ အမှန်မှာ၊ သင်သည် ဘုရားသခင်မဟုတ်ပါက သင်သည် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ဘုရားသခင်ဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဖန်တီးထားတဲ့ အရာဟာ မဖန်တီးထားတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင် တယ်။ တစ်နည်းတစ်ဖုံအားဖြင့် Triune God သည် သတ္တဝါဖြစ်လာပြီး ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အမြဲတမ်းဆောင်ကြဉ်းပေးကာ ဘုံဆက်ဆံရေးတွင် ထားရှိမည်ဆိုပါက သတ္တဝါတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေရမည်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ဘုရားသခင်-လူသား သခင်ယေရှု၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်းမှာ ပါဝင်လာပါသည်။ သားတော်ဘုရားသခင်သည် လူသားဖြစ်လာသည် - ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်ဆံရေးသို့ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု လုံး၀ မဟုတ်ပါ။ သူ၏ကျေးဇူးတော်၌ သုံးပါးသောဘုရားသခင်သည် သူ၏ဆက်ဆံရေးတွင်၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှု၌ ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးကို ထည့်သွင်းထားသည်။ Triune God ၏ဆက်ဆံရေးသို့ဖန်ဆင်းခြင်းသို့ပို့ဆောင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာဘုရားသခင်သည်ယေရှု၌မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချရန်နှင့်စိတ်ဆန္ဒနှင့်ဆန္ဒရှိသောလုပ်ရပ်အားဖြင့်သူ့ကိုယ်သူဖန်ဆင်းခြင်းကိုယူဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုအားဖြင့် လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိသော ဆက်ဆံရေးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်ရန် သုံးပါးသောဘုရားသခင်၏လုပ်ရပ်ကို "ကျေးဇူးတော်" ဟုခေါ်သည် (ဧဖက်၊ 1,2; 2,4နှစ်ဆယ် 2. ဓာတ်ဆီ 3,18).
ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးစားခြင်းအတွက်လူသားဖြစ်လာရန်ဘုရားသခင်သုံးကြိမ်မြောက်အကြံအစည်ကကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်မပြုမိလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမွေးစားရန်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်အပြစ်မှကယ်နုတ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်မှကယ်နုတ်ရန်ဘုရားသခင်မဖန်ဆင်းခဲ့ပါ။ ယေရှုခရစ်သည်“ ခ” အစီအစဉ်မရှိပါ။ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်ထံမှ ရူပါရုံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ပြဿနာကို အင်္ဂတေပြုလုပ်ပေးသော အင်္ဂတေတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမှန်တရားမှာ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးသို့ ပို့ဆောင်ရန် ပထမဆုံးသော တစ်ခုတည်းသောအကြံအစည်ဖြစ်သည်၊ သခင်ယေရှုသည် ကမ္ဘာမဖန်ဆင်းမီက ချမှတ်ခဲ့သည့် "A" အစီအစဉ်၏ ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည် (ဧဖက် 1,5စာ-၁၇; ဗျာဒိတ် ၂3,8) ဘုရားသခင်သည် အစကတည်းက စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း Triune God ၏ဆက်ဆံရေးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်ရန် ယေရှုကြွလာခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ပင်မဟုတ်၊ ထိုအကြံအစည်ကို မည်သည့်အရာကမျှ တားဆီးနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ငါတို့ရှိသမျှသည် သခင်ယေရှု၌ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။1. တိမောသေ 4,9-10) ဘုရားသခင်သည် သူ၏မွေးစားခြင်းအစီအစဉ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Triune God သည် ကျွန်ုပ်တို့မဖန်ဆင်းမီ ယေရှု၌ ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးစားခြင်းအစီအစဉ်ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုအချိန်တွင် ဘုရားသခင်၏မွေးစားသားသမီးများဖြစ်ကြသည်! (ဂလာတိ 4,4စာ-၇; ဧဖက် 1,3စာ-၉; ရောမ 8,15-17.23) ။
ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးကို သခင်ယေရှုအားဖြင့် သူ့ကိုယ်သူ ဆက်ဆံရေးအဖြစ် ခံယူရန် ဤသုံးပါးသော ဘုရား၏အကြံအစည်သည် တစ်ချိန်က မည်သူမျှမသိနိုင်သော လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုဖြစ်သည် (ကောလောသဲ၊ 1,24စာ-၂၉)။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွပြီးနောက်၊ ဘုရားသခင်၏အသက်တာ၌ ဤဧည့်ခံမှုနှင့် ပါဝင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့အား ဖော်ပြရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် စေလွှတ်တော်မူသည် (ယော ၁၆း၅-၁၅)။ လူသားအားလုံးအပေါ်သို့ ယခု သွန်းလောင်းပေးသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ သွန်သင်ချက်အားဖြင့် (တမန်တော်များ၏ တမန်တော်များ၊ 2,17ယုံကြည်သူများအားဖြင့်၊ ဤသစ္စာတရားကို အလေးပြုကြကုန်၏ (ဧဖက် 1,11-14) ဤနက်နဲသောအရာကို တကမ္ဘာလုံးသိစေသည် (ကောလောသဲ 1,3-၆)! အကယ်၍ ဤအမှန်တရားသည် လျှို့ဝှက်ထားမည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကိုလက်မခံနိုင်ဘဲ ၎င်း၏လွတ်လပ်မှုကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအစား၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မုသားကိုယုံကြည်ပြီး အဆိုးမြင်ဆက်ဆံရေးပြဿနာအမျိုးမျိုးကို တွေ့ကြုံခံစားရသည် (ရောမ ၃:၉-၂၀၊ ရောမ၊ 5,12-19!)။ သခင်ယေရှု၌မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်အမှန်တရားသိရှိလာမှသာလျှင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူအားလုံးနှင့် ယေရှုကိုမိမိ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုတွင် မှားယွင်းစွာမြင်ရခြင်းသည် မည်မျှအပြစ်ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့စတင်သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။4,20;1. ကောရိန္သု 5,14စာ-၇; ဧဖက် 4,6!) ဘုရားသခင်သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို လူတိုင်းသိစေလိုသည် (1. တိမောသေ 2,1-၈)။ ဤသည်မှာ သခင်ယေရှု၌ ကျေးဇူးတော်၏ သတင်းကောင်းဖြစ်သည် (တ ၂၀း၂၄)။
ယေရှု၏ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဗဟိုပြုသည့် ဤဓမ္မပညာ၏မျက်နှာတွင်၊ လူများကို "ကယ်တင်ရန်" ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုသည် မည်သူနည်း၊ ယခု ကိုယ်တော်၌ရှိနေပြီဖြစ်သည်—ဘုရားသခင့်မွေးစားသားသမီးများကို မြင်အောင်ကူညီပေးလိုပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ ယေရှု၌ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် သက်ဆိုင်နေပြီဖြစ်သည် (၎င်းက ၎င်းတို့အား ယုံကြည်ရန်၊ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန် တွန်းအားပေးလိမ့်မည်)။
တိ Brassell ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်